Ny Xiaomi Mi 9 5G no finday 5G mora indrindra eny an-tsena | Androidsis
Herinandro lasa izay a Xiaomi Mi 9 5G dia re fa hamely ny tsena tsy ho ela. Ny telefaona dia efa nandalo fanamarinana isan-karazany, toy ny TENAA, mba hilazan'ny zava-drehetra fa tsy haharitra ela isika hahalala azy amin'ny fomba ofisialy. Na dia tsy misy antsipiriany manokana momba ny fahatongavany ao amin'ny magazay aza. Ny hita fa mazava dia ho maodely mora azo amin'ny resaka vidiny.
Ireo telefaona 5G hitantsika anio dia misy vidiny lafo, mora mihoatra ny 1.000 euro. Noho izany, ity Xiaomi Mi 9 5G vaovao izay ho avy tsy ho ela ity dia hanana vidiny mora azo. Raha ny marina, nilaza ilay orinasa fa io no finday 5G mora indrindra.
Tadidio fa ny marika dia efa manana maodely miaraka amin'ny 5G, izay mora vidy kokoa noho ny fitaovana hafa. Mahaliana ihany koa ny mahita ny vidiny farany ananan'ity Xiaomi Mi 9 5G ity amin'ny fandefasana azy amin'ny magazay. Ny vinavinan'ny haino aman-jery sasany miaraka amin'ny vidiny manodidina ny 600 euro.
Antenaina fa hisy fiovana sasany raha oharina amin'ny maodely tany am-boalohany, ankoatry ny fisian'ny modem 5G. Ity modely vaovao ity dia somary matevina kokoa, eo ho eo amin'ny 1mm eo ho eo ny matevina amin'ity tranga ity. Na dia esorina amin'ity tranga ity ny bokotra ho an'ny faharanitan-tsaina artifisialy izay teo am-boalohany.
Hisy ihany koa ny fanatsarana eo amin'ny efijery an'ity Xiaomi Mi 9 5G ity. Araka ny fampitam-baovao, efijery misy fanapahana 2K no hampiasaina, izay tsy isalasalana fa ho fiakaran'ny kalitao ho an'ny telefaona. Noho izany, fanatsarana marobe no miandry antsika amin'ity kinova nohavaozina ity amin'ny marika farany sinoa sinoa.
Tsy manana antsipiriany momba ny fandefasana izahay amin'izao fotoana izao. Enga anie ity Xiaomi Mi 9 5G ity mandefa alohan'ny faran'ny taona, na dia tsy nanamafy na inona na inona aza ilay orinasa. Noho izany dia tsy maintsy miandry herinandro vitsivitsy isika mandra-pahafantatra bebe kokoa momba ity modely ity. Saingy azo antoka fa mampanantena ny fanombohana fahalianana lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Xiaomi Mi 9 5G no ho maodely 5G mora indrindra eny an-tsena
Ahinjiro ny tongotrao ary tadiavo ny lalanao mankany amin'ny olon-tianao ao amin'ny Stretchy Legs